Malunga nathi -Awiner Biotech Co., Ltd.
I-Awiner Biotech yasekwa ngo-2006,ibekwe emantla China-Shijiazhuang, kwiPhondo Hebei.Isixeko sikufuphi nomphathi wethu uBeijing, ukuthuthwa kufanelekile.I-Awiner Biotech izinikezele kuphando, ukuvelisa kunye nokusabalalisa i-agrochemicals. ubukhulu becala ijongana nemichiza yokubulala izitshabalalisi, iyeza lokubulala ukhula, imingxunya yokungunda, isilawuli sokukhula kwezityalo kunye nezitshabalalisi zempilo yoluntu.
Ukuza kuthi ga ngoku, siphumelele abathengi abavela eIraq, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Libya, Syria, Turkey, Yemen, Ukraine, Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Chile, Bolivia, Mexico, Brazil, Paraguay, Nigeria, Djibouti, eRwanda. , Somalia, Malaysia, Cambodia, Nepal, Myanmar njalo njalo.
Amazwe ethu athatha inxaxheba kulo mboniso yiTurkey, Iran, Pakistan, Nigeria, Russia, Cambodia, Malaysia, Uzbekistan, njl.
Uphando lwentengiso yabathengi
Siya kwilizwe labathengi ukuqhuba uhlolo lweemarike, ukuhlalutya nokusombulula iingxaki kubo, ukuqonda ukusetyenziswa kwemveliso, kwaye abathengi baya kusindwendwela
1 Myeke uMncedisi wokuthenga.
ungafumana konke ukwenziwa:
I-pesticide, i-herbicide, i-fungicide ...
akukho sidingo sokuthetha nemizi-mveliso emininzi.
2.Ukuqokelela onke amaxabiso avela kwimizi-mveliso eyahlukeneyo kunye nokubonelela ngamaxabiso akhuphisana kakhulu kubathengi. Ukwenza ukubala kwabathengi nganye kwipesenti
Ukusebenzisana ixesha elide kunye nobudlelwane obuhle kunye neefektri kusinceda ukuba sifumane iimpahla kunye nokuhanjiswa ngexesha.
4.Ungafumana uqeqesho lobungcali kwi-agrochemical specilist, ngaphezulu kwe-pesticides uqobo.
I-1 Inkampani inendlela epheleleyo yokuhlola imveliso kunye nezinto zokuvavanya eziphambili: uxinzelelo oluphezulu lwe-chromatography,
i-chromatografi yegesi, umhlalutyi wosasazo lobungakanani be-laser, ulungelelwaniso oluphezulu lokuchaneka, uhlalutyo lokufuma, njl.
Ukungena kunye nokuphuma, uhlalutyo lwebhetshi kunye nokufunyanwa kokugubungela kufikelela kwi-100%
2.Sisebenzisa iqela loyilo lokupakisha kunye nabahloli abanobuchule abanamava ukuhlangabezana nabathengi abahlukeneyo kunye
ukuphakheja iimfuno kunye nemigangatho ephezulu.
Izikhombisi zemveliso zifikelele okanye zagqitha kwimigangatho ye-FAO nakwamanye amazwe, kwaye zaphumelela ngamxhelo mnye
Izimvo ezivela kubathengi, ukubonelela ngesiqinisekiso esomeleleyo senkxaso kuphuhliso lwabathengi.
5, Siyalwamkela uvavanyo lwe-SGS kuzo zonke iimveliso!
Ukuhlolwa kwangaphambi kokuthunyelwa
1.Check ukuba akukho monakalo kwikhathoni, ukuvuza kwebhotile, njl iingxaki xa iimpahla zifika kwizibuko.
2.Check ubungakanani iibhokisi ukuqinisekisa akukho iibhokisi ezilahlekileyo.
3.Chech Nokuba iimveliso zentengiso, izipho, iisampulu, njl njl abathengi abafunwa zonke zilayishiwe, akukho nto ilahlekileyo.
4.Jonga ukuba kukho nasiphi na isicatshulwa okanye uphawu oluprintiweyo kwikhathoni engakulungelanga ukucoca abathengi okanye yonyuse umngcipheko wokuhlolwa.
Ukuhlolwa komntu ochazwe ngumthengi wesithathu
1.SGS isampulu ukuhlolwa phambi kokuba zithunyelwe
Buyisela abathengi kuvavanyo lwezibuko
1 Lungiselela iselfowuni okanye ikhamera yesisombululo esiphakamileyo.
Thatha iifoto emva koko ulungelelanise iinkcukacha ukuze uzithumele kubathengi nge-imeyile okanye izixhobo zonxibelelwano.
Ii -apps ezi-3 ezisekhaya eziphathwayo zingasetyenziselwa ukubiza abathengi ividiyo kunye nokusasaza imeko yokulayisha kumthengi.
Emva kokuba inqanawa ihamba
1. Siza kulandelela iinkcukacha zekhonteyina rhoqo.
2. Siza kukukhumbuza kwangexesha ngaphambi kokuba inqanawe ifike kwizibuko
3. Siza kulandelela ukuba iimpahla zonakalisiwe okanye azihambi.
4.Siza kulungiselela isishwankathelo seodolo, esivela kuyo ukuba ubuze ukuba ugqibe ugqityiwe.
Emva kokuba iodolo igqityiwe, siya kuba nentlanganiso yesishwankathelo, ukuhlanganisa amava, iingxaki ekuhlangatyezwane nazo kunye neemfuno ezizodwa zabathengi, ukulungiselela intsebenziswano elandelayo.
2. Zonke uyilo lweelebhile kunye neesampulu ziya kugcinwa.
3. Sinombulelo ongazenzisiyo ukuba umthengi unokubeka phambili izimvo kunye neengcebiso ngalo myalelo nakwinkonzo yethu, bonisa ukusilela, siya kuphucula ixesha elizayo.
Jonga phambili kwintsebenziswano elandelayo ukuba wanelisekile ziimveliso zethu kunye neenkonzo
Ungayisombulula njani ukuba kukho nayiphi na ingxaki kwiimpahla.
1: ingxaki yobulunga:
Umthengi uya kunika ingxelo yovavanyo yomntu wesithathu, ngeli xesha siza kuvavanya isampulu yeempahla. Ukuba ngaba kukho into engalunganga ngomgangatho onje ngomxholo awonelanga, inkampani yethu inoxanduva ngokupheleleyo.
Ukuba kukho ingxaki yokuvuza xa umthengi ethatha iimpahla kwizibuko, inkampani yethu inoxanduva
Iimpahla zisiwe kwizibuko kangangeentsuku ezili-15, kwaye ukupakisha kuvuza, konakele, njl., Inkampani yethu inoxanduva
Nceda unikeze iifoto kunye nevidiyo
(Nceda ungakhathazeki malunga nomgangatho weemveliso zethu, sinolawulo olungqongqo lomgangatho kunye nenkqubo yovavanyo. Zonke iimpahla ziya kuvavanywa ngaphambi kokuba zithunyelwe zivela efektri.)
ICaptan 95% TC, I-Azoxystrobin 20% yeWDG, IBifenthrin 25g / l EC, ICarbofuran 97% TC, ICyproconazole 40% WDG, Amitraz 12.5% ​​EC,